कथित 'भोलेबाबा' को ताकमा युवतीहरूः झारफुक गर्न जाने युवतीलाई १५ दिन सँगै राख्थे - छापा खबर - NepalKhabar - Leading online newspaper from Nepal
कथित 'भोलेबाबा' को ताकमा युवतीहरूः झारफुक गर्न जाने युवतीलाई १५ दिन सँगै राख्थे
‘एक जना महिला बिरामी भएर भोलेबाबा भनिने रामबहादुर चौधरीको घरमा आइन्। राधाजस्तै खचाखच मान्छे भरिएको आँगनमा उनलाई राखेर भोलेबाबा उर्फ रामबहादुरले।
त्यसपछि झारफुक सुरु भयो, उनकी ‘पार्वती’ अथवा सुखड गाउँकी स्मारिका चौधरीबाट। तिम्रो बिहेमा मैले पेन्टी उपहार दिएकी थिएँ, तिमीलाई थाहा छ कि छैन? हेर त तिम्रो पेन्टी फोहोर भएको छ स्मारिकाले झारफुक गरेझैं गरेर भनिन्। ती महिलाले लजाउँदै खचाखच मान्छेबीच सलवार खोलिन् र पेन्टी देखाइन्। त्यहाँ भएका सबैले ताली पिटे’, राधामाथि कुटपिट हुनुभन्दा केही दिन अघिको एउटा घटना सुनाउँदै स्थानीय युवती रेनुका बोहराले भनिन्।
रेनुकाले ती महिलामाथि अत्याचार भइरहेको लागे पनि त्यहाँ विरोधमा कसैले केही नबोल्दा चुपचाप सहनु परेको बताइन्। ‘आँगनमा भीडभाड देखे म पनि हेर्न जान्थेँ तर हरेक दिन झारफुकमा २५ वर्ष मुनिका युवती धेरै देखिन्थे’, उनले भनिन्। रामबहादुरलाई नजिकबाट चिन्नेहरूका अनुसार उनी पहिलेदेखि नै युवतीप्रति अत्यधिक आसक्त हुने गरेका खबर आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा शिवराज भट्टले कैलालीबाट लेखेका छन्।
‘एकातिर विदेशमा पतिको मृत्यु भएको छ, यता भोलेबाबाले कालो बिरालो भएर कतारमा पतिलाई खाएको भन्दै बोक्सीको आरोप लगाउँदा राधाको के हालत भयो होला’, एमालेका स्थानीय नेता खेम सापकोटाले भने।
पार्वती बुढा घोडाघोडी नगरपालिका ५ देउकलियास्थित राष्ट्रिय माविमा १० कक्षामा अध्ययन गर्छिन्। उनी भूतप्रेतमा विश्वास गर्दिनन्। गाउँका एक युवाले भोलेबाबाको ढोंग रचेर युवतीलाई ‘टार्गेट’ बनाएको उनलाई एकरत्ति मन परेको थिएन।
‘गाउँकै चिनेको मान्छे, तपार्इंले गरिरहेको काम ठीक होइन भनेको त मेरो ढाडमा दुई÷तीन पल्ट हिर्कायो र म भागेँ’, उनले भनिन्, ‘तँ मलाई विश्वास नगर्ने? मलाई विश्वास नगर्नेलाई म नास गरिदिन्छु भनेर धम्कायो।’
युवती बिरामी भएर आउँदा भोलेबाबा उर्फ रामबहादुर खुसी हुने गरेको स्थानीयले बताए। स्थानीय एक जना शिक्षकका बुवा ६५ बर्से जीतबहादुर डगौरा उपचार गराउन उनकोमा जाँदा गालामा तातो त्रिशूलले डामेर पोलिदिएको स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयले वृद्धलाई पोलेको भन्दै विरोध पनि गरे तर त्यसपछि डगौरा उपचार गराउन गएनन्।
‘युवती आए १५ दिन उपचार गर्छु, झारफुक गर्छु भन्ने तर वृद्धवृद्धा आए यसरी डढाउने कामले पनि उनको आकर्षण युवतीमै देखिन्छ’, एक स्थानीय महिलाले भनिन्।
प्रकाशित २९ फागुन २०७४, मंगलबार | 2018-03-13 08:48:54